Gabar Ku Xirnayd Xabsi Ku Yaalla Kuuriyada Waqooyi oo La Baxsatay Askarigi Illaalinayey | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Usama Cismaan, February 16, 2016
BBC Somali — May 26, 2020
Waxwalba wuu ku fikiray. Wuxuu jaray fillooyinka korontada iyo kaamerooyiinka qarsoon ee wax duuba. Wuxuu si iskii ah uu soo galay shaqada habeenkii. Gabadhana albaabka dambe ayuu kabihi ay ku bixi lahayd u dhigay.
Jeon wuxuu saqdii dhexe hurdada ka toosiyey Kim wuxuuna u kaxeeyey jidka uu ku baxsan lahaa ee uu qorsheeyay. Habeen ka hor ayuu sii diyaarsaday laba boorso oo uu ku diyaarsaday dharki iyo cunadi uu u baahnaa, wuxuu sida oo kale diyaarsaday middi iyo sun. Fursad kale ma uusan helin, wuxuuna sitaa qori oo Kim ay isku deyday inay ka dhaadhiciso inuu ka tago laakiin Jeon wuu adkeystay.
“Waan ogaa inaan fursad haystay habeenkaas oo keliya. Haddaanan habeenkaa sidaa sameyna lahayn, waa la i qaban lahaa waana la i dili lahaa,” ayuu yiri Jeon Gwang-jin oo 26 jir ah.
“Haddii ay isku dayaan iney baxsashada iga hor istaagaan, waxaan qorsheynayey inaan xabbado ku rido orodna aan isa sii daayo. Haddii aan orod uga baxsan waayana waxaan ii qorsheysneyd inaan isdilo.”
Haddii arrimahaasi oo dhan aysan u suuragelin waxaa u qorsheysnyda inuu middi isgeliyo ama uu sunta uu sito cabbo.
“Mar haddaan dhimasho isu sii diyaariyey, haba yaraatee wax i cabsi gelinayay ma jirin,” ayuu yiri Jeon.
Labadooduba daaqadda ayey ka soo boodeen, waxayna oo ku soo dhacay goob bannaan oo ay maxbiista ku jimicsadaan. Hortooda waxaa ah darbiga xabsiga oo ay ka bixi lahaayeen, balse waxay aad uga cabsanayeen eeyda ay waardiiyeyaasha adeegsadaan.
Haddii aysan xitaa cidna arag oo ay ilaalada deyrka xabsiga ka baxsadaan, waxaa haddana laga sugayaa ciidamada dusha sare ee xabsiga gaaf wareegta iyo in ay ka gudbaan webiga Tumen waxay ku xirnayd xorriyaddooda. Laakiin waxa ay damacsanaayeen ayaa ku qaaday in ay u bareeraan qatar kasta.
Kim waxaa laga soo qaaday xabsiga dhexe waxaana loo badalay xabsi ka adag midkii ay ku xirnayd. Labadooduba wey ogaayeen iney adag tahay in xabsigaasi ay nolol uga baxaan.
Inta badan Maxbuuska iyo ilaalidiisu saaxibtinimo ma dhexmari karto. Maxbuuska iyo ilaaladiisa waxay kulmeen laba bilood ka hor oo ku beegneyd May 2019-kii. Jeon wuxuu ka mid ahaa ilaalada ka shaqeysa xabsiga Onsong oo ku yaalla Kooriyada Waqooyi. Isaga iyo saxibkii.
Isaga iyo asxaabtiisa waxay Kim iyo dhowr maxbuus oo kale ku ilaalinayeen xabsigaasi, maalin iyo habeenba, waxayna dhammaantood ahaayeen xukun sugayaal. Kim waxaa qabtay indhaha Jeon, waxayna ku lebisnayd dhar qurux badan iyo muuqaalkeedii cajiibka ahaa.
Kim waxay ahayd shaqadeeda waxa loo yaqaaanno dullaal. Waxay gacan ka geysan jirtay furidda kanaallada si ay uga gudbaan dadka baxsadka ah iyo qoysaska qaxaya. Taas waxay ahayd caawinta dadka aan awoodin iyo la hadlidda dadkii baxsaday. Taasina waxay ahayd shaqada ah dhaqaalaha fiican ka helaan dadka nolosha fiican ku nool ee Kuuriyada Waqooyi.
Kim waxay shaqadaas ku heli jirtay lacag horumaris ah oo gaaraysay boqolkiiba 30%, iyo celcelis ahaan lacag gaareysay 2.8m oo lacagta Kuuriyada Waqooyi ah una dhiganta £1,798, sida cilmi baaris lagu ogaaday. Marka la eego xaaladda Kim iyo Jeon wax badan kuma kala duwaneen. Jeon wuxuu muddo 10 sana ah uu soo ahaa askari ka tirsan maamulka keli-taliska ah ee Kuuriyada Waqooyi ee uu hoggaaminayo Kim Jong-un.
Kim waxay aragtideedu isbeddeshay marki lagu xukumay xabsiga. Xukunkanna ma ahayn kii ugu horreeyey oo lagu xukumo, balse xabsigan labaad ee la dhigay sida loola dhaqmay ayaa ka duwanaa xabsigi ay horay u soo gashay. Haddii ay xabsigan nolol kaga soo baxdo xataa waxay garwaaqsatay iney howsheedi dullaalnimo ee ay ku shaqeyneysay ay ku noqotana markale la soo xiri doono, waa sababta ku kalliftay iney ku dhaqaaqdo arrintan khatarteeda leh ee baxsashada ah.
Kim waxaa marki ugu horreysay loo soo xiray in ay ka shaqeynaysey howl dullaalnimo oo dalka khatar badan u leh, iyada oo lagu eedeeyey iney dadka Kuuriyada Waqooyi ka soo jeedo ay ka gudbiso xadka Shiinaha, waddadaasi oo ah halka ay Jeon iyo Kim doonayeen iney ka gudbaan.
“Shaqooyinka noocan ah ma qaban kartid mar hadaadan qof ku dhex lahayn militariga,” ayey tiri.
Askarta waxay siin jirtay laaluush si ay dhinacyada uga eegaan. Waxayna sheegtay lixdii sano ee la soo dhaafay iney howshaasi guula badan ka gaartay oo dadka ay gudbisay ay ka qaadaneysay inta u dhaxeysa $1,433 ilaa iyo $2,149 doolar. Taasoo ka dhigan haddaad hal qof gudbiso oo aad lacagtaasi hesho iney lacagtaasi u dhiganto celcelis ahaan dakhliga qofka Kuuriyada Waqooyi uu ku noolaanayo sanadkii. Waxaana lagu xukumay shan sano oo xabsi ah. Markay xabsigaasi soo dhammeysatayna shaqadi dullaalnimada ee adka u khatarta badneed ay dib ugu laabatay.
Talefannada gacanta ee Kuuriyada Waqooyi waxaa ka xiran khadka uu qofka dibad ku wici laha, marka Kim waxaa lagu soo eedeeyey in ay taleefanno dibadda ah in ay Shiinaha kula xiriirtay, taleefannadaasi oo ay u adeegsaneysay dadka ay Shiinaha u tahriibineysay.
“Waxaan u sheegay askarta isoo qabatay iney i sii daayaan si kastana waan u baryay, “lacagtaad doontaanna aan idin siiyo ayaan ku yiri balse wey iga diideen.”
Qoyska Jeon sida qoyska Kim waa beeraleey.
“Si aad Kuuriyada Waqooyi ugu noolaato waxaad u baahan tahay lacag… balse xaaladdu marba marka ka sii dambeysa wey ka sii dareysaa… xataa imtixaanaadka kama dambeysta ee aad u galeysid jaamacadda si dhibca fiican laguu siiyo, waa inaad macallimiinta jaamacadda aad laaluush siisaa,” ayuu yiri Jeon.
“Waxaan garanayaa nin ka qalin jabiyey jaamacadda Kim Il-sung oo ugu sumcadda badan dalkaasi oo ka mid ahaa ardayda dhibacaha fiican ku qalinjabiyey oo ay noolashiisa ku soo gabagabowday in uu hilib bannaanada ku iibiyo,” ayuu yiri.
Shacabka dalka Kuuriyada Waqooyi ku nool noolashooda ayey la daalaa dhacaan.
Xiriirka dhex mara maxbuuska iyo ilaaladiisa ayaa inta badan ah mid aan loo baran.
“Maxaabiista xataa looma oggola iney il buuxda ku fiiriyaan askarta ilaalineyso,” ayuu yiri Jeon. “Sida cirka iyo dhulka ay u kala fog yihiin ayey u kala sarreeyaan”. “Kaamerooyin ayaa meel walba ku xiran marka maxbuska wuxuu si fudud ula socon karaa qofka ka dhow isaga oo la soconaya dhaqdhaqaaqa kaameeradda.” “Gabadha maxbuuska ah daryeel gaar ah ayaan siin jiray”, ayuu yiri.
Kim waxaa lagu xukumay shan sano oo xarig ah balse xabsiga Chongori oo aadka u cabsida badan waxay ku jirtay seddex bilood.
“Rajo beel ayaa igu dhacday… inaan isdilo xataa marar badan ayaa ku fakaray. Marwelibana waan ooyn jiray,” ayey tiri. “Marka aad gasho xabsiga Kiyohwaso waxaa lagaala noqonayaa muwaaddinnimada,” ayuu yiri Jeon. “Adiga wixi markaa ka dambeeye bani aadam maba tihid, xayawaanka xataa waad ka hoos mari,”
“Inaan ku caawiyo ayaan doonayaa walaasheey. Haddii kale xabsigan ayaad ku dhimmaneysaa. Waddada keli oo aan kuugu badbaadin karana waxay tahay inaan xabsiga kaa saaro,” ayuu yiri. Balse si la mid ah muwaaddiiniin badan oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay waxaa la baray ineysan cidna ku kalsoonaan. “Waxaan u maleeyey inuu khiyamo ila damacsan yahay”.
“Hadalkisa waan ka soo horjeestay waxaanna ku iri: “Ma basaas baad tahay?” Maxaad ka faa’ideysaa inaan i basaasto iyo inaan nafteyda halis geliso? balse wuxuu igu yiri xalku sidaad moodday maaha”. Wuxuuna ii sheegay inuu doonayo inuu xabsigan iga saaro oo uu ila baxsado ina geeyo dalka Kuuriyada Koonfureed. Kim waxay bilalawday iney ku kalsoonaato iyadoo haddana cabsi aad u badan dareemeysay.
“Wadnahayga si waalli ah yuu u garaacmayey,” ayey tiri Kim. “Weli taariikhda Kuuriyada Waqooyi kama dhicin iney maxbuus iyo ilaaladiisa islabaxsadaa,” ayey tiri.
12-kii bishii July ee kal hore, ayuu Jeon ogaaday in la joogo xilligi munaasabka ah. Kim waxaa loo kaxeeyey qeyb gaar ah, ninki Jeon madaxa u ahaana habeenkaas gurigiisa ayuu aaday oo xabsiga ma joogin.” Annaga oo madowga ka faa’ideysaneyna waxaan ka soo boodnay daaqadaha, deyrkana waan soo dhaafnay webiga dabaal ayaan kaga gudubnay. “Kim jirkeeda aad ayuu daciif u ahaa oo xabsiga ay bilooyinka ku jirtay yey aad ugu daciiftay.”
Webiga markaan si nabad ah ku gaarnay waxaan argnay iftiin noo soo jira wax ka yar 50 mitir. Wuxuuna iftiinkaasi ka imanayey ciidamada ilaalada xadka.
“Meel ayaan ku dhuumanay si aan hadalkooda u dhageysanno waxaanna ogaannay iney yihiin ciidamo isbeddelaya,” ayuu yiri Jeon.
“Waxyar ayaan halkaas joognay… 30 daqiiqa kaddib markii aan shanqar weynay ayaan dhanka webiga aadnay, kadib anigu waa dabaashay balse Kim dabaal ma garaneyn”.
Jeon gacanna qorigiisa ayuu ku qabsaday gacanna Kim si uu webigaas Tumer uga gudbo. “Markii aan bartamaha wabiga gaarnay ayaan arkay biyihi oo madaxeyga ka sara maray oo i liqay,” ayuu yiri Kim. “Biyiha ayaan quustay mana awoodin inaan indhaha kala qaado.”
Kim waxay Jeon ka baryeysay iney dib u laabtaan. “Waxaan u shegay; ‘haddii aan dib u noqonno labadeennaba waa dhimaneynaa. Kolba haddaan dhimaneyno halkan aan ku dhimanno’. Balse waan rajo beelay waxaanna ku fikiraye: ‘Ma sidaanaan u dhimanayna, ma halkana ayey wax weliba ku dhammaanayaa?'”
Ugu dambeynti Jeon lugahiisa ayaa dhulka taabtay. Wabiga ayaan uga baxnay waxaan nabad ku gaarnay xadka Shiinaha waloow uu xadkaasi laftiisa amaan ahayn.
“Seddex maalmood marka aan duurka ku dhuumaaleysaneynay waxaan la kulannay dadka deegaanka oo nagu caawiyey taleefan si aan u wacanno dullaaliin naga caawiya sidii aan xadka uga tallaabi lahayn, balse dullaalkii wuxuu noo sheegay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi heegan la geliyey si ay noo soo qabtaan, askarta Shiinahana ay gacan siinayaan”.
Falkan ay ku dhaqaaqeen Kim iyo Jeon ayaa noqonaya mid si weyn u waxyeelleeya qoysaskooda ay kaga soo tageen Kuuriyada Waqooyi iyada oo ay dhici karto in su’aala badan laga weydiiyo, dhibaata kalana ay dowladda kala kulmaan.
“Waxaan dareemayey inaan dambiila ahay maadaamaa aan ninkeyga iyo carruurteydaba ka soo tagay, qalbi jab aad u weyn ayaaa igu dhacay,” ayey tiri Kim.
Jeon sida oo kale wuxuu dareemayey dareen la mid ah midka Kim, wuxuuna billaabay hees uu murugada isaga baab’inayo inuu qaado. Markii ay gaareen halki ay u socdeen, waxay qorsheeyeen iney aadaan Mareykanka, oo waxay beddeleen qorshihi ahaa Kuuriyada Koonfureed.
“Mareykanka ii raac,” ayuu Jeon ku baryay kim. Madaxa ayey lushay iyada oo u muujineysa diidamadeeda. “Kalsooni kuma qabo. Madaamaa aan af Ingiriisiga ku hadlin. Waan cabsaday.” Jeon wuxuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo, isaga oo u sheegay ‘haddeey israaceen iney af Ingirisiga wada baranayaan’.
“Meel kasta oo aad tagto ha i illaawin,” ayey kim si deggan ugu tiri. Balse labadooduba way ku faraxsan yihiin inay ka soo baxsadaan nidaamkii Kuuriyada Waqooyi ee ‘dulmiga ku dhisnaa’. Kim waxay sheegtay inaan waligeed loo oggolaan xitaa inay u safarto caasimada dalka ee Pyongyang.
“Markaan dib u milicsano halkaan ka nimid, waxaan labadeennaba ku nooleyn xabsi. Mana awoodin meesha aan rabno inaan aadno iyo waxa aan doonno inaan sameyno.”
“Indhaha Muwaaddiniin Kuuriyada Waqooyi wax ma arkaan, dhagahoodana wax ma maqlaan, afafkoodana kuma hadlaan,” ayuu yiri Jeon.
Magacda maxabuusta waan beddelnay si aan loo garan.
Tags: Gabar Ku Xirnayd Xabsi Ku Yaalla Kuuriyada Waqooyi oo La Baxsatay Askarigi Illaalinayey
Next post Haweeney Noolasha ku Silicday ugu Dambeyna Libin ka Gaartay
Previous post Ninkii Muslimka Ahaa ee Ciraaq u Dhashay ee Reer Galbeedka 1,000 sano uga Horreeyay Saynis ee Noolaha